Posted by Tranquillus | May 3, 2018 | Xafiiska
Inta udhaxeysa barnaamijyada cusub, qaababka cusub iyo qalabka iskaashiga cusub, way adkaan kartaa in la helo ugu dambeyntii aduunka ee xafiisyada xafiisyada.
Sidaa daraadeed si aad uhesho xiriirka halkan waa xirfado muhiim ah oo lagu hormarinaayo bakhaarnimada otomaatiga.
Sababta loo horumariyo xirfadaha xafiiska?
Taasi ma baxsan doonto, dijitaalka ayaa si wayn u bedelay dunida oo aan ku noolnahay iyo gaar ahaan shirkadda.
Hadda waa lagama maarmaan in la isticmaalo qalabka xafiisyada oo aan kaliya ku sii jiri doonin tartanka, lakiin sidoo kale si khibrad leh ayuu u kobcin karaa shaqsi ahaan iyo shakhsi ahaanba.
Dad badan ayaa ku socda jidka ama ma raadsanayaan inay yeeshaan xirfado cusub oo muhiim u ah adduunka maanta shaqada.
Tusaale ahaan, idinkoo ogaanaya sida loo isticmaalo qalabka kombiyuutarka ayaa noqday mid aan lagama maarmaan u ah ganacsiyada taas oo ahayd dhawr sano ka hor.
Si aad u ogaatid in qalabka xafiisyada xafiisku hadda la aqoonsado inuu yahay xirfad furaha muhiim ah, sidaas darteed waxaa lagu qiimeeyn karaa loo-shaqeeye.
Macalamiinta qalabka qoraalka ereyga:
Noocyada daaweynta ee ugu fiican ayaa ah shaki la'aan Word.
Barnaamijkan wuxuu suurtogal u yahay inuu galo qoraalka halkii kiiloomitir, si uu u habeeyo oo loo sameeyo qaab-dhismeed.
Noocyada badan ee software-ka xafiiskani waxay suurtogal u tahay in ay horumariyaan dukumiintiyada xirfadlaha ah sida kulamada kulanka ama xiriirkalaakiin sidoo kale dukumintiyada caadiga ah sida warqadaha ama CVs.
Si aad u ogaatid sida loola tacaalo barnaamijka preAO:
Marka aan ka hadleyno barnaamijka preAO waa dhab ahaan barnaamijka bandhigyada kombuyuutarka lagu caawiyo.
Isticmaalka ugu badan waa PowerPoint. Waa qalab otometeriga ah oo lagaa rabo in aad ku guuleysatid inaad soo bandhigto sawirada ama natiijooyinka shirarka tusaale ahaan.
READ Noqo qayb raadinta Google
Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida loo isticmaalo Excel.
Waa warshad kuu ogolaanaysa inaad sameyso xisaabin kakan oo ka badan ama yar oo la isticmaalayo qaababka, maareynta liiska xogta, fuliyaan tirakoobyada ama inay metelaan macluumaadka qaabka sawirrada.
Sida Word, sifooyinkaasi waa kuwo ballaaran waxayna noqon karaan kuwo waxtar leh ama waxtar leh iyadoo ku xiran hadba meesha aad ku jirto.
Abuuraan falanqaynta fikirka maskaxeed:
Barnaamijka ugu fudud ee lagu bilaabi karo waa Xmind. Waa nidaam xafiis oo wanaagsan oo si sahlan u abuuri kara tirooyin tiro badan.
Waxaa lagu qadariyaa qaababka badan ee la heli karo iyo fursadaha dhoofinta.
Waa barnaamijka ugu fiican si loo ogaado khariidado faahfaahsan oo maskaxeed ama tayada maskaxeed.
Waxaan soo qaadnay tusaalayaal qaar ka mid ah xirfadaha muhiimka ah si loo horumariyo otomaatiga xafiiska.
Waxaa jira qalabyo badan iyo qalab xafiisyo oo xiiso leh si loo ogaado sida loo isticmaalo.
Ugu dambeyntii, haddii aad horeyba u ogaatid sida loo isticmaalo qalabkan, wax walbaa kaa hor istaageysa inaad xoojiso xirfadahaaga, waxaad leedahay wax kasta oo aad ku guulaysato!
Xirfadaha muhiimka ah ee lagu hormarinayo otomaatiga xafiiska Agoosto 19th, 2018Tranquillus
horeSidee loo dejiyaa hadafyo la isku halleyn karo?
socdaSidee si firfircoon uga shaqeyn kartaa meel bannaan?